Mara ọkwa ZTE nubia N1 na batrị 5.000 mAh | Gam akporosis
ZTE mara ọkwa na nubia N1 nwere 5,5 ″ ihuenyo, 13MP igwefoto na 5.000 mAh batrị
ZTE webatara nubia N1 na China, ụbọchị mgbe nke a ọzọ nubia, na batrị 5.000mAh nke kwere nkwa ibata ruo ụbọchị 3 nke ndụ obodo kwụụrụ onwe ya. Ọ bụrụ na nke a bụ eziokwu, a ga-ahụrịrị ya, n'ezie, ọ ga-enwe ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ekwentị nwere ike iru nnwere onwe ahụ oge ọ bụla anyị gara n'ihu ịhụ na ọtụtụ na-anọ n'ụbọchị site na itinye mgbakwunye ndị na-eri ihe Ọzọ.
Ewezuga ụbọchị atọ nke ndụ batrị, ZTE nubia na-abịa na a Helio P10 MediaTek mgbawa octa-core, 5,5 nke anụ ọhịa ahụ bụ ihuenyo 1080p ma nwee gam akporo 6.0 (Marshmallow) sọftụwia ngwanrọ na nubia UI 4.0 oyi akwa. Ọ dị na igwefoto ebe ha tinyekwara elekwasị anya na 13 megapixel na ọkụ ọkụ ọkụ, autofocus nchọpụta oge (PDAF) na ihu 13 MP.
I nwekwara ike ịtụkwasị obi Nchekwa 3 GB Ram na 64 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya na ngwakọ abụọ SIM nkwado, nke na-enye gị ohere iji otu n'ime oghere ahụ gbasaa ebe nchekwa dị n'ime ya na microSD. Nhazi ya dị n'otu akụkụ aluminom ma nwee ihe mmetụta mkpịsị aka na azụ nke nwere ike ịmeghe ekwentị na sekọnd 0,2.
ZTE nubia N1 nkọwa
5,5-anụ ọhịa (1920 x 1080) Ngosipụta Full HD
Octa-isi MediaTek Helio P10 1.8 GHz mgbawa
64 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa site na microSD
13 MP n'azụ igwefoto na ikanam flash, PDAF, f / 2.2 aperture, 5P lens
13 MP n'ihu igwefoto
4G LTE na VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS + GLONASS, USB Type-C
5.000 mAh batrị
ZTE nubia N1 dị na ọla edo na ọla ọcha na ya ọnụahịa bụ $ 255 Na mgbanwe. Ọ ga-adị na China site na ụlọ ahịa gọọmentị ya ma anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara mgbasawanye mba ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » ZTE » ZTE mara ọkwa na nubia N1 nwere 5,5 ″ ihuenyo, 13MP igwefoto na 5.000 mAh batrị